Warar ku saabsan horyaallada Yurub qaarkood - BBC Somali
Warar ku saabsan horyaallada Yurub qaarkood
Image caption Kooxaha Real Madrid iyo Barcelona
Ciyaar aad u xiisa badan oo dhexmartay kooxaha ugu xoogga badan tartanka LALIGA ee dalka Spain ee Barcelona iyo Real Madrid ayaa waxaa ku guulaysatay kooxda Real Madrid oo 3-1 ku badisay.
Guushani waxay soo gaabisay farqiga kala horreynta labadan kooxood oo hadda Barcelona oo tartanka hoggaaminaysa ay hal dhibic oo keliya ka horreyso Real Madrid.
Saddexda gool waxaa Real Madrid u kala dhaliyay Ronaldo, Pepe iyo Benzema.
Goolka Barcelona waxaa dhaliyay Neymar.
Kooxda Almería waxaa iyadana ka badisay Atlethico Bilbao oo 1-0 uga adkaatay.
Waxaa guuldarro weyn la kulantay kooxda Manchester City ee haysata koobka loo tartamayo kaddib markii kooxda West Ham ay 2-1 ku martay. Waxaa kaloo khasaare weyn la kulantay kooxda Sunderland oo Arsenal ay ku martay 2-0 iyadoo labada goolba uu u dhaliyay laacibka Sanchez oo ka faa'iidaystay khaladaad ay sameeyeen difaaca iyo goolhayaha Sunderland.
Waxaa toddobaadkan mar kale guulaysatay kooxda Southampton oo 1-0 ku dhufatay kooxda Stoke, isla markaana soo gaartay kaalinta 2aad ee kala horreynta kooxaha oo Chelsea ay hoggaanka u hayso iyo Swansea oo 2-0 uga adkaatay Leicester.